Eto ambonin’ny tany: an-dranomasina avokoa ny 70%-n’ny fitaterana | NewsMada
Eto ambonin’ny tany: an-dranomasina avokoa ny 70%-n’ny fitaterana
Par Taratra sur 10/09/2018
Tany Toliara, ny faran’ny aogositra 2018 ny fankalazana ny Andro maneran-tany ho an’ny ranomasina sy ny Andro natokana ho an’ny tantsambo nokarakarain’ny APMF. Ny 7 septambra 2018 teo ny fanamarihana izany ho an’ny faritra Boeny, tao amin’ny sekoly fanofanana tantsambo (Enem). Nanamarihana izany ny fampirantina ny tontolo an-dranomasina, fametrahana fehezam-boninkazo manoloana ny tsangambato fahatsiarovana ireo tantsambo namoy ny ainy teo am-perin’asa, lahateny nifandimbiasana niampy fizarana amboara ho an’ireo nandresy tamin’ny lalao natao.
« Lovantsika ny fitaterana an-dranomasina, ho antoky ny ho avy, ho tsara kokoa sy fahatomombanan’ny fiainan’ny tantsambo ». Ireo no lohahevitra nentina nanaitra ny sain’ireo rehetra tonga nanatrika ny fankalazana. Mizara roa mazava tsara sy mifameno ireo lohahevitra ireo. Tsapa fa na sarobidy ho antsika aza ny ranomasina, mbola maro ny zon’ireo tantsambo tsy voahaja, indrindra ireo teratany malagasy.
Anisan’ny iankinan’ny harinkaren’ny faritra sy ny Nosy ny ranomasina. Ankehitriny, an-dranomasina avokoa ny 70%-n’ny fitaterana eto ambonin’ny tany. Mampiasa izany betsaka ny faritra Boeny ho an’ny varotra sy ny fitaterana olona eto amin’ny Nosy sy iraisam-pirenena. Maro ny tombontsoa amin’ny fampiasana ny fitaterana an-dranomasina, toy ny fahamoran’ny sarany, ary tsy mifidy entana taterina. Tombony ankoatra izay, tsy mamoaka loto manimba tontolo iainana firy raha oharina amin’ireo fitaovam-pitaterana hafa.
Nisy solontenan’ireo tantsambo nijoro vavolombelona, nanamafy ny zava-manjo azy ireo. Nangataka izy ny mba hijeren’ireo tompon’andraikitra mahefa azy ireo. Nanohina ny lehiben’ny faritra Boeny, i Saïd Ahamad Jaffar, ny zava-misy iainan’ireo tantsambo malagasy ka nanamafisany ny antson’izy ireo amin’ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny, ny hijerena manokana ny zon’ireo tantsambo matetika voahitsakitsaka.
Antom-pivelomana: mila havaozina sy iofanana ny asa tanana 30/05/2020
Fanatanjahantena: mety mbola ho sarotra ny hiverenany 30/05/2020
CEO Cnaps: fianakaviana 112 nahazo ny karatra Afafi 30/05/2020
Minisiteran’ny Tanora: lomana ny aorian’ny fihibohana 30/05/2020
Fampandrosoana ifotony: Indostria isam-paritra manodina ny vokatry ny fambolena 30/05/2020